Ngwa 6 ka ị teta n'oge ka àkwà mmiri | Androidsis
Ngwa 6 ga-eteta gị n'oge mgbe akwa ahụ gachara
Echi, akwa mmiri October a, nke, ka, dị mkpụmkpụ maka ọtụtụ n'ime anyị, ga-abịa na njedebe. Mgbe ị meghere anya gị ị ga-eche eziokwu ihu: kọfị na ịnya ụgbọ ala na-arụ ọrụ ma ọ bụ klaasị. Ma ebe ọ bụ na ọ ka nwere awa ole na ole fọdụrụ ruo oge ahụ ga-abịarute, na Androidsis anyị ga-enye gị aka.
Jiri ohere nke ụbọchị ụka na izu ụka dị ogologo mee ihe site n'ịgbalị ụfọdụ ndị ọhụrụ ngwa elekere mkpu maka gam akporo, n'ihi na echi, ị ga-eteta n'oge na n'ike. You ga - ahụ ọtụtụ nhọrọ ị ga - ahọrọ, mana nke kachasị mkpa bụ na ndị na - arahụ ụra ga - achọta ngwa ga - akpọte gị.
1 Elekere mkpuchi maka mkpu miri emi
2 Morningtụtụ ọma mkpu
3 Apụghị M Teta! Oti mkpu na Elekere
4 Bịara n'Ezi Oge - Elekere Mkpu
5 Oti mkpu na Elekere + ngụ oge
6 Oge nnụnụ na-eme mkpu
Elekere mkpuchi maka mkpu miri emi
"Elekere mkpu maka oké ụra", nke bụ otú a na-akpọ ngwa a tupu nsụgharị na ha na-eme anyị na Playlọ Ahịa Google, bụ a mfe, ma irè mkpu elekere ngwa. Site na ya ị ga - enwe ike hazi ọnụọgụ mkpuchi. Na mgbakwunye, ịnwere ike ịhazi ụdị mkpuchi dị iche iche n'etiti ha bụ ngụda oge, mkpuchi pụrụ iche maka otu oge, ugboro ugboro, dịka ọmụmaatụ, ịda ụda kwa ụbọchị na-arụ ọrụ n'otu oge ... Ọ gụnyere nkwado maka gam akporo Wear, ọnụ ọgụgụ nke nrọ, na ọtụtụ ndị ọzọ. Ọ bụ ngwa ị ga - enweta ma jiri kpamkpam n’efu; gụnyere mbipute akwụ ụgwọ mana naanị ihe dị iche bụ na mgbasa ozi ga-apụ n'anya.
Developer: Otu elekere mkpu mkpu
Morningtụtụ ọma mkpu
"Mortụtụ elekere mkpu ụtụtụ" (ma ọ bụ elekere mkpu nke ụtụtụ, dị ka aha mbụ ya), bụ otu n'ime ngwa elekere mkpuchi ọhụụ. Ọzọkwa gbalịa nyochaa ụra gịNakwa oge ị tetere, agbanyeghị n'ezie, maka nke a ị ga-ehi ụra n'ekwentị na bed. Ọ na-enye ọrụ na arụmọrụ dị mma, na na-agụnye ụfọdụ ndị ọzọ mbụ atụmatụ dị ka a na-acha ọcha mkpọtụ generator, mmelite ihu igwe, ọnọdụ abalị, na ndị ọzọ. Ọ bụ ngwa nbudata n'efu nke naanị ịzụta n'ime ngwa ahụ bụ ịga na pro pro.
Sleepzy: Nyocha ụra
Apụghị M Teta! Oti mkpu na Elekere
"Apụghị m Tetanụ Elekere Elekere" na-eme kpọmkwem ihe aha ya na-egosi, yabụ ọ bụ ọkacha mma maka ndị nwere nsogbu iteta n'ụtụtụ. Ngwa a gụnyere ihe ịma aka asatọ ka ị nwee ike ịkwụsị mkpu ahụ kwa ụtụtụ n'ụzọ ga-eme ka ị teta n'ụra ma bilie. Ọ nwekwara ụdị dị iche iche nke mkpu, ụfọdụ atụmatụ nhazi, na ndị ọzọ. The free version na ọkachamara version bụ fọrọ nke nta ka yiri ya, ma ọ bụrụ na ị na-eche na-enwe mgbasa ozi, ị nwere ike ịzọpụta atọ auros nke pro version na ị nwere ike ịnweta site na ihe integrated zuo.
Apụghị M Teta! Elekere Mkpu
Developer: Okike Kog
"Oge" bụ ngwa elekere pụrụ iche nke na-enye a mara ezigbo mma ma na-atọ ụtọ imewe. Na mgbakwunye, ọ na-agbanwe ọrụ ndị bụ isi nke ụdị ngwa ndị a niile, yana ngụ oge, mkpu, gburugburu na klọọkụ. Otu n'ime ihe ndị bụ isi bụ ọrụ Smart Rise na ụda olu mkpuchi. Ngwa a bụ n'efu ma ibudata ma jiri. Jiri uru!
Oti mkpu na Elekere + ngụ oge
"Oti mkpu na Elekere + ngụ oge" (Oti mkpu na Elekere Xtreme, nke bụ ihe mbụ aha) bụ otu n'ime ndị kasị ewu ewu na mkpu elekere ngwa na Play Store maka gam akporo. Enyele ọkọlọtọ edemede-elu atụmatụ, nke na-agụnye music Mkpu, mkpu ịma aka, akpaaka-itoolu, snooze button customization, na ọtụtụ ndị ọzọ. Mana o makwara ụra gị, auneuq anaghị eme ya yana ngwa ndị ọzọ, mana ọ na-enye aka ịghọta etu ị si ehi ụra. N'ezie, ọ bụ ezie na enwere ike ibudata ya, ndị ọrụ na-eme mkpesa nke ukwuu banyere otu mgbasa ozi na-akpasu iwe, yabụ ọ bụrụ na ị jiri ya ma nwee mmasị na ya, ị nwere ike ịhọrọ ịhọrọ ụdị akwụ ụgwọ
Teta mkpu: Oge nkwụsị na Oge
Developer: Ọkara Labs
Oge nnụnụ na-eme mkpu
Oge elekere oge na-aga n'ihu bụ ngwa elekere mkpuchi; gụnyere nhọrọ iji hazie a ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ọnụọgụ na-enweghị ngwụcha, gburugburu, nsogbu ịma ọkwa, ozi gbasara ihu igwe na ndị ọzọ. Ọbụna ọ na-enye ohere na-agbanwe ụda mkpu gị na akpaghị aka kwa ụbọchị, yabụ na iteta n’ụra nụ otu ihe. Versionsdị ndị nweere onwe ha na nke a kwụrụ ụgwọ yiri nke ahụ, ọ bụ ezie na nke abụọ na-ewepu mgbasa ozi.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Ngwa 6 ga-eteta gị n'oge mgbe akwa ahụ gachara
[APK] Download ma wụnye ihe ọhụụ Pixel Launcher 2 na ịnweta Google Ugbu a na-enweghị mkpa mgbọrọgwụ
Ngwa 5 na egwuregwu iji nwee anụrị na Sọnde a